के तपार्इ बेरोजगार हुनुहुन्छ? अब टेन्सन नलिनुस अब फर्म भरेर यसरी लिन पाइन्छ भत्ता! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > के तपार्इ बेरोजगार हुनुहुन्छ? अब टेन्सन नलिनुस अब फर्म भरेर यसरी लिन पाइन्छ भत्ता!
admin September 14, 2018 Uncategorized, जीवनशैली 0
बेरोजगारले भत्ता प्राप्त गर्ने विधेयक पारित हुने चरणमा पुगेको छ। सरकारले रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न ल्याएको विधेयकमा बेरोजगारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव छ। विधेयक समितिबाट पास भएर संसदमा पुगिसकेको छ। असोज २ गतेभित्रै यसले कानूनी हैसियत समेत प्राप्त गर्दैछ। विधेयक पास भएपछि बेरोजगारले वार्षिक कम्तिमा २२ हजार भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर, भत्ता प्राप्त गर्न सहज भने छैन।
त्यस्तो जीवन निर्वाह भत्ता पाउन मन्त्रालयले तेर्स्याउने लामो शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ। बेरोजगार भएर मात्र भत्ता पाइने छैन। परिवारको सदस्य रोजगार भएमात्र पनि बेरोजगारले भत्ता पाउने छैन। त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिने उल्लेख छ। यस्तो आयको सीमा सरकारले तय गर्नेछ। त्यस्तै, विधेयकमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ।
कति शक्तिशाली हुन पार्टी निकटका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू… ल हेर्नुस यति धेरै धनाढ्य!